पारस शाह सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानी शाहले लेखिन् यस्ता ५ भावुक स्टाटस | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पारस शाह सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानी शाहले लेखिन् यस्ता ५ भावुक स्टाटस
प्रकाशित मिति २३ कार्तिक २०७६, शनिबार ०७:४१ लेखक संगम ढकाल
काठमाडाैं । पूर्वयुवराज पारस शाह र समलिङ्गी मोडल सोनीका रोकायबीचको अफयर्स चलिरहेको खबरले यतिबेला चर्चा पाएको छ । पारससँग सङ्गत् बढेपछि सोनिकाले अश्लील हर्कतहरु पनि बन्द गरेकी छिन । सार्वजनिक रुपमै अश्लील तथा छाडा शब्दहरु बोल्ने र अर्धनग्न भएर हिड्ने जस्ता कार्यहरुले युटुबर समेत रहेकी सोनीका बेला बखत चर्चामा आउने गरेकी छिन । तिनै सोनीका पूर्व युवराज पारस शाहसँग एकदमै नजिक बनेकी छिन । यो कुरा उनी आफैले स्वीकार पनि गरिसकेकी छिन ।
पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीका लगातार भावुक फेसबुक स्टाटस लेख्दै आइरहेकी छिन्। केहि समयअघि थाइल्याण्डकी एक युवतीसँगको सम्बन्ध बाहिरिएपछि पारसपत्नी हिमानी शाह दुखि बनेकी थिइन । अहिले पनि पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीले लगातार फेसबुकमा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन ।
हिमानीले अक्टोबर ३० मा आफ्नो फेसबुक फ्यान पेजमा लेखेकी छिन् – ‘मान्छे चाहे जतिसुकै पढेलेखेको , धनी , आकर्षक अनि बुद्धिमान भएपनि यदी उ कुनै नारीको सम्मान गर्दैन भने उसको खुवीको काम छैन !! जय नेपाल’ त्यसपछि उनले मनभरी पिडा भएपनि आफ्नो सन्तानको लागि मुस्कुराउने भगवानलाई आमा भनिन्छ भन्दै छोराछोरीसहितको तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन ।
अलि गम्भीर मुद्रामा खिचिएको तस्वीर पोस्ट गर्दै नोभेम्बर १ मा उनले लेखेकी छैन, – ‘ज़िन्दगीमा के छ भन्दा पनि को छ ?? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ !’ त्यस्तै नोभेम्बर २ मा उनले लेखेकी छिन् – ‘तब सम्म कमाउनुस जब सम्म “महङ्गो” चिज “सस्तो” लाग्दैन चाहे त्यो “सामान” होस या “सम्मान” !!’ नोभेम्बर ३ मा अझै सेड मुडमा देखिएको हिमानीले घतलाग्दो स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्- ‘को पो छन र खुसी यहा ?? कही कतै अपुरो सपनाले आशू टीलपिल गरेर, मुस्कुराउनै दिदैन !!’
केही दिनयता पूर्वयुवराज पारस शाह र सोनिकाबीचको एउटा भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । पोखरामा खिचिएको भनिएको भिडियोमा पारस बाइकमा बसेका थिए । उक्त भिडियो पछि फेरी सोनीका रोकाया पनि पुर्व युवराज पारस शाहसंग अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगेकी छिन् । तर उनीहरु पैदल हिडेर भने त्यहाँ पुगेका हैनन । उनीहरु पोखराबाट सिधै हेलिकप्टरमा चढेर त्यहाँ पुगेका थिए । अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगेको भिडियो सोनीका रोकायाले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखेकी छिन् ।
छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ७० हजार
काठमाडौँ — नेपाली बजारमा छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ७० हजार पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय…
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनलाई अराजकताको केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका…
तपाईँले पक्कैपनि कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने अवस्थाको महसुस गरेको हुनुहुन्छ होला । एकैठाँउमा…
बाँदर लखेट्ने क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किएर एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । ओखलढुंगामा बाँदर लखेट्ने क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किएर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मोलुङ गाउँपालिका-३ थुम्की जंगलमा बाँदर…
काठमाडौं । शिक्षकहरूले अब राजनीति गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४…
आत्महत्या गरेका युवकको पहिचान नहुँदा ४० दिनदेखि अस्पतालमै शव
काठमाडौं । काठमाडौको चन्द्रागिरि नगरपालिका-१४, नैकापमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका एक युवकको पहिचान खुल्न नसक्दा शव अलपत्र परेको छ ।…